Usoro ọmụmụ anyị | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Ntọala ntọala afọ izizi
Usoro EYFS na-ekpuchi ụmụ anyị site na afọ abụọ ruo na njedebe nke afọ nnabata ha. Usoro ọmụmụ nke afọ mbụ na-akwado ọtụtụ mkpa pụrụ iche na Acorn na Oakleigh School. Anyị na-ewulite na ihe ọmụma anyị nwere na nwatakịrị iji mee ka mmụta dị iche iche wee nye gburugburu ebe obibi nke na-enye nwata ahụ ohere ịmụ na ịzụlite ike ha kachasị.
Followmụaka na-agbaso usoro ọmụmụ EYFS na mpaghara ndị a:
Onwe, Mmekọrịta na Mmetụta Obi
Nkwurịta okwu na Asụsụ
Ngosipụta Arts na Kere
Nzọụkwụ Key 1 na Key Key 2 Usoro ọmụmụ
Anyị kwenyesiri ike na ụmụ akwụkwọ anyị kwesịrị usoro ọmụmụ nke ahaziri iche, dị mkpa, na-akpali akpali, na-agbanwe agbanwe, nwere ọnọdụ ndụ dị oke mkpa maka mmụta, ma nwee obosara kwesịrị ekwesị. Anyị na-enye usoro mmụta dị iche iche dị iche iche maka ịmụ ihe agbakwunyere n'ime usoro okike, nke onwe ya na nke na-atọ ụtọ, nke anapụtara site na ahụmịhe zuru oke.
Anyị na-echebara inye ụmụ anyị atụmanya ndị siri ike.
Anyị ghotara na ọ dị mkpa ka ụmụ akwụkwọ anyị nwee ike ịmalite ọrụ ndị dị mkpa iji mụta ndị achọrọ na usoro ọmụmụ mba. Havemụaka nwere ọtụtụ nkuzi na mmuta agụmagụ, gụnyere ịkọ ọdịiche dị iche, mmuo olu, na ime akara ngosi oge na ide ederede.
Nkà ndị a nwere ike ịmalite na ntanetị na obere usoro.
Anyị na-ele usoro ọmụmụ anya dị ka ọnọdụ maka mmụta na ọkwa mmepe mbụ.
Atụmatụ nkeonwe na-ahụ na ụmụaka na-ewulite ọkwa nke ihe ọmụma, nka, akparamaagwa na nghọta. Anyị na-azụlite mpaghara ndị a iji nyere ụmụaka aka inwe ọganihu na ọnụego ha.
Learnmụaka na amụmụ ihe nke ọma na gburugburu ebe obibi na-ahụta nwata niile. Anyị na-enyere ụmụ akwụkwọ anyị aka ịzụlite Nkwukọrịta na mmekọrịta ha, Cognition na Mmụta, Ahụike, Mmetụta Uche na Ahụike na Sensory na Ahụhụ. Ebumnuche Sensory na nke mmụta na Learningmụta site na ICT bụ ụdọ na-agba ọsọ na usoro ọmụmụ anyị niile. A na-ahụ ICT dị ka atụmatụ na-enyere aka, a ga-ejikwa ya mee ka ohere ha nwere gaa n'èzí, kwalite nkwukọrịta, na ịzụlite njikwa gburugburu ebe obibi yana ịchọ ọdịmma ha.
Anyị na-eme atụmatụ ma hazie usoro ọmụmụ ka ụmụ akwụkwọ niile soro na-eme ihe bara uru maka ha yana nke nwere ebumnuche mmụta dị mkpa na ihe ịma aka. Anyị na-eji ọtụtụ usoro nkuzi na ụzọ dị iche iche n'ime nkuzi ọ bụla ka ụmụ akwụkwọ niile wee sonye ma kwado ha nke ọma ịmụ.
Anyị na-akwado ụmụ akwụkwọ iji zụlite ihe ọmụma, nghọta, nkà na omume ga-enyere ha aka ibi ndụ na-atọ ụtọ na mpụga akwụkwọ na iji ohere kachasị ha nweta mgbe ha gụsịrị akwụkwọ.
Anyị ghọtara mkpa ọ dị ịmụ site na Play, iji zụlite akụkụ niile nke nwata na-etolite, gụnyere ọdịmma mmetụta uche ha, cognition, nka mmekọrịta mmadụ na mmepe anụ ahụ.
E kere usoro ọmụmụ anyị n'ime ụzọ atọ, nke bụ:
Nhazi tupu - ihe dị ka P1-P4
Ọkara - ihe dịka P4-P8
Emezu - ihe dịka P7-National Curriculum afọ metụtara afọ
Usoro ọmụmụ anyị na-amata akụkụ anọ nke mmụta. Akụkụ ndị a kwekọrọ na Mmụta, Ahụike na Nlekọta Nlekọta (EHCPs) na Atụmatụ Mmụta Onwe Onye (PLP), si otú a na-ahụ na anyị na-elebara mkpa ụmụ akwụkwọ ọ bụla anya, na-esite na EHCP ha gaa na usoro ọmụmụ nke a na-enye kwa ụbọchị.
Ndị a bụ:
Nkwalite Nkwukọrịta na Mmekọrịta
Cognition na Mmụta
Ahụ ike, nke mmetụta uche na nke uche
Mmetụta Sensory na Ahụhụ
Isi okwu anyị dị ogologo na -eme afọ atọ ma gụnye ihe ndị a: Sensens, Shapes / Pattern, Seaside, Onwe Anyị, Agba, Mmiri, Ìhè na Ọchịchịrị, Mmegharị na Anmụ anụmanụ. Ebumnuche nke iji isiokwu bụ inye ụmụaka nkuzi na mmụta nke agbakwunyere n'ime ntụrụndụ, mkpali na ọnọdụ bara uru nke na-adọrọ mmasị ụmụaka. Tụkwasị na nke a, ha na-akwado usoro ọmụmụ sara mbara ma baa ọgaranya ka ewepụtara. A ga-atụ anya ka ụmụ akwụkwọ gaghachigharịa ihe mmụta mbụ kama ha ga-etinye aka na nsonaazụ mmụta siri ike karị. Usoro a na - eme ka enwee mmetụta nke agam n’ihu ma na - amuta ihe site na ikwughachi ihe dị mkpa nke na - enyocha ọganiihu na ezigbo nghọta, ma na - enyekwa ohere maka ịkọwapụta nke dị oke mkpa maka ụmụ akwụkwọ anyị n’oge a.
Ntọala ntọala mmalite nke afọ ndị mbụ, Ntọala nke 1 na Key Stage 2 ụmụaka niile na-agbaso otu Okwu Gburugburu. Ndị a na-aga elekere atọ kwa afọ, nke na-eme ka ohere ịmeghachi, ịkwado na ịgbatị nkà na mpụta na usoro. Isiokwu ndị a na-enye ọnọdụ na-atọ ụtọ, na-akpali akpali, nke nwere nzube na ebumnuche maka mmụta dabere na nka.
Tụkwasị na nke a, ha na-akwado usoro ọmụmụ sara mbara ma baa ọgaranya ka ewepụtara. A ga-atụ anya ka ụmụ akwụkwọ gaghachigharịa ihe mmụta mbụ kama ha ga-etinye aka na nsonaazụ mmụta siri ike karị. Usoro a na - eme ka enwee mmetụta nke agam n’ihu ma na - am ụ ihe site na ikwughachi okwu ndị dị mkpa nke na - enyocha ọganiihu na ezigbo nghọta, ma na - enye ohere maka ịkọwapụta nke dị oke mkpa maka ụmụ akwụkwọ anyị n’oge a.
Isi okwu anyi bu:
Sensọ Dị na ternkpụrụ Oke Osimiri
Onwe Anyị Agba mmiri
Ìhè na Ọchịchịrị Movement Animals
Biko hụ anyị 3-Afọ Cycle akwụkwọ (PDF) maka mmebi ọzọ nke isiokwu anyị maka ụmụaka na KS1 na KS2.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere usoro ọmụmụ anyị, biko kpọtụrụ onye nkuzi klaasị nwa gị ma ọ bụ ndị ụlọ akwụkwọ.
A na-akụzi Mmụta Okpukpe (RE) n'ofe ụlọ akwụkwọ, na nzukọ ndị okwukwe na-eme mgbe nile na dịka akụkụ nke usoro mmụta cross-curricular. Anyị agbanweela ihe niile anyị na-eme kwa ụbọchị n'ofufe. Na ngwụcha ụbọchị ọ bụla anyị na-ezukọ na klaasị iji tụgharịa uche n'ihe anyị rụzuru na ihe anyị mụtara banyere ibe anyị na ụwa, site na ịme udo, udo dị jụụ. Klaasị ọ bụla na-abịakwute nke a n'ụzọ nwere isi nye ụmụ akwụkwọ ahụ. Ngosipụta ngwụsị nke ụbọchị a na mmuta nke ihe ụmụ akwụkwọ rụzuru bụ akụkụ dị mkpa nke RE na Oakleigh & EYC
Ebumnuche anyị bụ ịkwalite mmepe ime mmụọ, omume, mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị nke ụmụ akwụkwọ niile; iji nye aka na mmepe onwe ha na ọdịmma ha; itinye aka na mmekorita nke obodo site na ịkwalite nkwanye ugwu na nghọta na inye ohere maka mmepe ime mmụọ na nghọta miri emi banyere mkpa okpukperechi na ndụ ndị ọzọ - n'otu n'otu, obodo na ọdịbendị. A na-akụzikwa RE site na ọrụ na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana site na ụlọ akwụkwọ maka Equalities.
Ebumnuche niile maka ụmụ akwụkwọ bụ:
Zụlite mmetụta na ha pụrụ iche, na ha bụ akụkụ nke ihe pụrụ iche, na na ha dị mkpa.
Iji nweta ụjọ na ebube nke ụwa eke na arụpụtara.
Inweta ọtụtụ mmetụta na mmetụta uche.
Iji nwee ọ learningụ ịmụ banyere na ihu akụkụ dị iche iche nke okpukperechi n'ihi na a na-akụzi ya n'ụzọ na-akpali akpali ma na-atọ ụtọ nke na-akpali ha ịmekọrịta na ịkparịta ụka.
Iji kwado mmepe nke ọgụgụ ọgụgụ (ụjọ na ịtụnanya); yana ịkwado mmụta nke onwe na nke ime mmụọ nke ụmụ akwụkwọ site na ịgba ume ka ha mata onwe ha ma mee emume njirimara onye ọbụla.
Iji mepụta ikuku nke ụmụaka nwere obi iru ala, obi ụtọ na nnwere onwe ịbụ onwe ha.